Ganacsato ku hanti-beeshay dagaalkii Guriceel oo nolol adag wajahaya - Radio Ergo
Khadiija oo shaah ku iibineysa meeshii ay ku taallay maqaayadeedii gubatay/Cabdirisaaq Haajirow/Ergo
(ERGO) – Dahabo Ciise Guutaale oo ah hooyo korsata carruur agoon ah waxay la daalaa-dhacaysaa biilka qoyskeeda kaddib markii meherad ay ku lahayd suuqa Munawar ay ku waysay dagaalkii Guriceel. Afar ka tirsan carruurteeda oo u dhiganayay iskuulka hoose/dhexe ee Jaylaani ayaa waxbarashada laga soo eryay maaddaama aysan bixin lacagta waxbarashada ee bishii Oktoobar oo ah $54. Waxay sidoo kale bixin weyday lacagta kirada guri afar qol ah oo ay magaalada ka deggen tahay, taasi oo ah $35 bishii.
“Qof walaal ah shaxaadkiis iyo wax la mid ah oo aan qadar lahayn ayaan hadda ku nool nahay oo wax ku maareeyaa. Laakiin markii hore qof ganacsanaya oo wax walba ay isagu isdabbarayaan ahaa, wax nooga baaqaday iyo wax aan hayno oo hadda maanta na taakulaynayana ma jiraan,” ayay tiri Dahabo oo meheraddeeda ka heli jirtay maalinkii lix ilaa iyo toban doollar oo faa’iido ah.
Dahabo waxay ka mid tahay 260 ganacsato ah oo ay ganacsiyadooda uu burburiyay madfac ku soo dhacay suuqa 24 Oktoobar intii uu socday dagaalkii Ahlu Sunnah Wal Jamaaca, oo doonaysay inay la wareegto maamulka magaalada, iyo ciidamada dowlad-goboleedka Galmudug.
Madfaca ku soo dhacay suuqa ayaa sababay dab gubay xarumo ay ku jiraan isbitaallada Kulmiye iyo Istarliin, xarumo qaabilsanaa farsamada gacanta sida cillad-bixinta gaadiidka, alxanka iyo bakhaarro shidaal.
Muddo 8 sano ah ayay ka soo shaqeyneysay ganacsiga ka gubtay oo ay ku qiimaysay $3,000. Waxay sheegtay in $500 ay ku leedahay haweenay dhimatay inkastoo ehelka haweeneyda ay ku cadaadinayaan bixinta daynta.
“Gacantana iiguma jirto [daynta] bixinteedii, cafiskeediina ma arkayo oo qofkii lahaana wuu dhintay, kollay dadkii dhaxalkeeda lahaa baa xoolahaas u taagan. Xoolahaas baa la igu leeyahay, daynta igu dhibka badan intaas waaye,” ayay tiri.
Xubno ka tirsan maamulka Galmudug oo horraantii bishan Nofeembar la kulmay ganacsato oo ay ka mid ahayd Dahabo, ayay tilmaantay in xog-uruurin ay ku sameeyeen khasaaraha gaaray inkastoo aysan wali wax jawaab ah ka helin.
Cabdirisaaq Cabdulaahi Faarax, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Guriceel ayaa Raadiyow Ergo u sheegay inay billaabeen qaaraan oo ay ula jeedaan inay ku kaalmeeyaan ganacsatada ay dhibaatadu soo gaartay. Waxay rajaynayaan inay soo gaba-gabeeyaan qaaraanka bisha Diseembar.
“Assessmentiga [xogtii aan uruurinnay] wasaaradda ayaan la kaashanaynay, wasaaradduna waxay la kaashanaysay oo report-yadeeda la wadaagaysay hay’adaha internationalka [caalamiga] ah oo kaalmada bixiya si ay iyaguna dadka kaalmo ula soo gaaraan. Walina wax hadda kaalmo ah oo soo gaaray ma jiraan, laakiin qorshe isku tashi ah oo dadka deegaanka ah ayaan wadnaa, oo ah in ugu yaraan qofkii kab loo sameeyo si uusan qofku barakac u noqonin,” ayuu yiri.
Dad badan ayaa ku dhintay dagaalka, halka dad tiradooda lagu qiyaasay 100,000 ay ka barakaceen guryahooda.
Khadiija Maxamed Diini oo ganacsi yar ku lahayd suuqa waxay dagaalka ku weysay curudkeeda oo 32 jir ah. Waxaa ku dhacday xabbad wiifto ah isagoo gaarigiisa ku wata magaalada dhexdeeda.
Khadiija waxay sidoo kale dagaalka ku weyday maqaayad yar iyo dukaan ay ku lahayd suuqa Munawar. Waxay tilmaantay in dhimashada wiilkeeda ay ku khasabtay in iyada iyo siddeed carruur ah oo ay dhashay in ay ku tirsanaadaan cunto ay ka soo dawarsato deriskeeda.
“Qof qof baryi jirtay ma jirto, waxaa weeye mucjisadaan ayaa nagu dhacday, gubasho iyo dhimasho iyo wax walba baa na soo saameeyay oo noo imaaday,” ayay tiri.
Waxay xustay in curudkeeda, oo ku shaqeysan jiray darawalnimo uu ka taageeri jiray biilka qoyska maalmaha ay suuq-la’aan ku dhacdo. Qoyska ayaa hadda ku tiirsan kaligeed, maaddaama seygeeda uu la xanuunsan yahay cudurka sonkorta. Ganacsiga suuqa uga gubtay waxay ku qiyaastay $6,000.
Khadija ayaa sheegtay in hadda aysan wax qorsho ah u hayn qoyskeeda, balse ay rajeyneyso in gargaar la soo gaarsiiyo si ay dib uga soo kabato khasaarihii ka soo gaaray dagaalka.